အိမ်ငှားနေမယ့် ယောင်းလေးတွေ မဖြစ်မနေ ဖတ်သင့်တဲ့အချက်(၆)ချက် -
Posted on March 11, 2019 March 12, 2019 Author Phyu Thant	Comment(0)
အိမ်ငှားနေပြီးမှ စိတ်ညစ်ရတာတွေ၊ အိမ်ရှင်နဲ့ အဆင်မပြေတာတွေစတဲ့ အခက်ခဲတွေကို ယောင်းလေးတို့ ကြုံတွေ့ဖူးကြတယ်ဆိုရင် ဖြူသန့်ပြောပြမယ့် ဒီအချက်လေးတွေကိုသတိထားကြည့်ရအောင်နော်
ဆောက်ထားတာကြာတဲ့ အိမ်တွေ၊တိုက်ခန်းတွေက လျှပ်စစ်မီးကြိုးတွေဆွေးနေတတ်ပါတယ်။ မီးကြိုးဆွေးနေတာတွေက အချိန်မရွေး မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တာမို့လို့ သတိထားကြည့်သင့်ပါတယ် ယောင်းရေ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာညစ်ပတ်တာတွေ၊အိမ်ဘေးမှာ ညောင်ပင်တွေကပ်နေတာတွေ ကိုသတိထားကြည့်ပါ။ အိမ်ငှားဖို့သေချာပြီဆိုရင် အိမ်မငှားခင်ကတည်းက အိမ်ရှင်ကိုရှင်းလင်းပေးဖို့တောင်းဆိုပြီး ကြိုရှင်းထားသင့်ပါတယ် ယောင်းရေ။
Related Article >>>>>>စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံထဲက အံ့သြဖွယ်အမျိုးသမီး နယ်လီ ဘလိုင်း
အိမ်ရှင် နဲ့ စာချုပ်စာတမ်း
အိမ်ရှင်က အရေးကြီးဆုံးပဲနော်။ အိမ်ရှင်က ခဏပဲတွေ့ရလို့ အရေးမပါဘူး မထင်ပါနဲ့နော်။ အိမ်ရှင်က အပေါက်ဆိုးတာတွေ၊အိမ်မှာ ဘာမလုပ်ရဘူး ညာမလုပ်ရဘူး၊ အိမ်ခန်းခကို ခဏခဏတိုးကောက်တာတွေဆို ကိုယ့်အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်တော်တော် ဖြစ်ရပါတယ်။ တစ်ခါတလေများ အဲ့လို အိမ်ရှင်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးလေရော 😀
အဲဒီအတွက် စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါ တစ်ခါတည်း သူလိုချင်တဲ့အချက် ကိုယ်တောင်းဆိုချင်တာတွေကို တစ်ခါတည်း ယတိပြတ် ချုပ်ဆိုထားတာ ကောင်းပါတယ်။
Related Article>>>>>ဘယ်ရာသီခွင်တွေက အားကစားလုပ်ရမှာ အပျင်းဆုံးဖြစ်မလဲ
လုံးချင်းအိမ်ငှားမယ့်ယောင်းလေးတွေဆိုရင် ခြံစည်းရိုးကိုစစ်ကြည့်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ယောင်းလေးတို့ လုံခြုံစွာနေနိုင်ဖို့ ခြံစည်ရိုး ကောင်းမကောင်းအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ တိုက်ခန်းငှားနေမယ့် ယောင်းလေးတွေဆိုရင်တော့ အိမ်တံခါး ၊ပြတင်းပေါက်တွေစစ်သင့်ပါတယ်နော်။
သက်တမ်းကြာနေတဲ့အိ်မ် တွေမှာခေါင်မိုးတွေက ပျက်စီးနေတတ်ပါတယ်။နွေရာသီမှာတော့ ခေါင်မိုးပေါက်လည်း အရေးမကြီးလှပေမဲ့ မိုးတွင်းဆိုရင်တော့ လုံးဝမေ့ထားလို့ မရဘူးနော်။အိမ်မငှားခင်ထဲက ခေါင်မိုးကောင်းမကောင်း၊ မျက်နှာကျက်ကောင်းမကောင်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါ။ ငှားနေပြီးမှ သိတာဆိုရင် ပြင်ဆင်စရိတ်တွေက ပိုဈေးကြီးနေတတ်ပါတယ်နော်။
အဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အိမ်အတွင်းပိုင်းတွေကို သေချာစစ်ပါနော်။ ဧည့်ခန်းတွေ၊အိပ်ခန်းတွေ၊ မီးဖိုချောင်တွေ၊ နံရံကဆေးသုတ်ထားတာက အစ စစ်ဆေးပါ။ရေတိုင်ကီတွေ၊ရေဆိုးပေါက်တွေ ကောင်းမကောင်းစစ်ပါ။
Related Article>>>၂၀၁၉မှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာမယ့် ဖက်ရှင်Trend (၇) ခု
ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းလေးတို့အိမ်ငှားရင် သတိထားရမယ့် အချက်လေးတွေကို တီးခေါက်မိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။ မသိသေးတဲ့သူတွေကိုလဲ ဝေမျှပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့ယောင်းရေ….
Phyu Thant (For Her Myanmar )
အိမျငှားနပွေီးမှ စိတျညဈရတာတှေ၊ အိမျရှငျနဲ့ အဆငျမပွတောတှစေတဲ့ အခကျခဲတှကေို ယောငျးလေးတို့ ကွုံတှဖေူ့းကွတယျဆိုရငျ ဖွူသနျ့ပွောပွမယျ့ ဒီအခကျြလေးတှကေိုသတိထားကွညျ့ရအောငျနျော။
ဆောကျထားတာကွာတဲ့ အိမျတှေ၊တိုကျခနျးတှကေ လြှပျစဈမီးကွိုးတှဆှေေးနတေတျပါတယျ။ မီးကွိုးဆှေးနတောတှကေ အခြိနျမရှေး မီးဘေးအန်တရယျရှိနိုငျတာမို့လို့ သတိထားကွညျ့သငျ့ပါတယျ ယောငျးရေ။
ပတျဝနျးကငျြကိုကွညျ့ဖို့မမပေ့ါနဲ့။ ပတျဝနျးကငျြမှာညဈပတျတာတှေ၊အိမျဘေးမှာ ညောငျပငျတှကေပျနတောတှေ ကိုသတိထားကွညျ့ပါ။ အိမျငှားဖို့သခြောပွီဆိုရငျ အိမျမငှားခငျထဲက အိမျရှငျကိုရှငျးလငျးပေးဖို့တောငျးဆိုပွီး ကွိုရှငျးထားသငျ့ပါတယျ ယောငျးရေ။
Related Article >>>>>>စိတျကနျြးမာရေးဆေးရုံထဲက အံ့သွဖှယျအမြိုးသမီး နယျလီ ဘလိုငျး
အိမျရှငျ နဲ့ စာခြုပျစာတမျး
အိမျရှငျက အရေးကွီးဆုံးပဲနျော။ အိမျရှငျကခဏပဲတှရေ့လို့ အရေးမပါဘူး မထငျပါနဲ့နျော။ အိမျရှငျက အပေါကျဆိုးတာတှေ၊အိမျမှာ ဘာမလုပျရဘူး ညာမလုပျရဘူး၊ အိမျခနျးခကို ခဏခဏတိုးကောကျတာတှဆေို ကိုယျ့အတှကျ စိတျအနှောငျ့အယှကျတျောတျော ဖွဈရပါတယျ။ တဈခါတလမြေား အဲ့လို အိမျရှငျနဲ့ နီးနီးကပျကပျနရေတယျဆိုရငျတော့ ပိုဆိုးလရေော 😀
အဲဒီအတှကျ စာခြုပျခြုပျတဲ့အခါ တဈခါတညျး သူလိုခငျြတဲ့အခကျြ ကိုယျတောငျးဆိုခငျြတာတှကေို တဈခါတညျး ယတိပွတျ ခြုပျဆိုထားတာ ကောငျးပါတယျ။
Related Article>>>>>ဘယျရာသီခှငျတှကေ အားကစားလုပျရမှာ အပငျြးဆုံးဖွဈမလဲ
လုံးခငျြးအိမျငှားမယျ့ယောငျးလေးတှဆေိုရငျ ခွံစညျးရိုးကိုစဈကွညျ့ဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့ဦးနျော။ယောငျးလေးတို့ လုံခွုံစှာနနေိုငျဖို့ ခွံစညျရိုး ကောငျးမကောငျးအရေးကွီးဆုံးပါပဲ။ တိုကျခနျးငှားနမေယျ့ ယောငျးလေးတှဆေိုရငျတော့ အိမျတံခါး ၊ပွတငျးပေါကျတှစေဈသငျ့ပါတယျနျော။
သကျတမျးကွာနတေဲ့အိမျ တှမှောခေါငျမိုးတှကေ ပကျြစီးနတေတျပါတယျ။နှရောသီမှာတော့ ခေါငျမိုးပေါကျလဲ အရေးမကွီးလှပမေဲ့ မိုးတှငျးဆိုရငျတော့ လုံးဝမထေ့ားလို့ မရဘူးနျော။အိမျမငှားခငျထဲက ခေါငျမိုးကောငျးမကောငျး၊ မကျြနှာကကျြကောငျးမကောငျး ကြှမျးကငျြတဲ့ သူတှနေဲ့တိုငျပငျကွညျ့ပါ။ ငှားနပွေီးမှ သိတာဆိုရငျ ပွငျဆငျစရိတျတှကေ ပိုဈေးကွီးနတေတျပါတယျနျော။
အဓိကအရေးကွီးဆုံးဖွဈတဲ့အိမျအတှငျးပိုငျးတှကေို သခြောစဈပါနျော။ဧညျ့ခနျးတှေ၊အိပျခနျးတှေ၊ မီးဖိုခြောငျတှေ၊ နံရံကဆေးသုတျထားတာက အစ စဈဆေးပါ။ရတေိုငျကီတှေ၊ရဆေိုးပေါကျတှေ ကောငျးမကောငျးစဈပါ။
Related Article>>>၂၀၁၉မှာ ရပေနျးအစားဆုံးဖွဈလာမယျ့ ဖကျရှငျTrend (၇) ခု
ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးလေးတို့အိမျငှားရငျ သတိထားရမယျ့ အခကျြလေးတှကေို တီးခေါကျမိလောကျပွီ ထငျပါတယျနျော။ မသိသေးတဲ့သူတှကေိုလဲ ဝမြှေပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့ယောငျးရေ….
Tagged environment, House, Knowledge, tenants
ယောင်းတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဟန့်တားနေတဲ့ အရာ (၇)မျိုး
Posted on August 4, 2017 Author Christina Rosy
ဘာတွေက ယောင်းတို့ကို အောင်မြင်မှုကနေ ပိတ်ဆို့ထားသလဲဆိုတာ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
အရေပြားဆရာဝန်တွေပြောတဲ့ တကယ်လိုအပ်တဲ့SPF ပမာဏ
Posted on May 1, 2017 August 28, 2017 Author
SPF ပမာဏက များလေကောင်းလေ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တော်တဲ့ SPF ပမာဏကိုပဲ သုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်.
Knowledge Motivation Women News
သံမဏိ မိန်းမပျို သို့မဟုတ် လောကငရဲမှ လွတ်မြောက်လာသူ နာဒီယာ
Posted on March 1, 2018 Author Aye Mon Kyaw
“ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်မဟာ ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးသောမိန်းကလေး ဖြစ်ချင်မိပါတယ်”